Ra'isul Wasraaha Pakistan oo Warqad Xarig Loo Jaray
Maxkamadda sare ee Pakistan ayaa amartay in la soo xiro Ra'siul Wasaare, Raja Pervez Ashraf
Maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa amar ku bixisay xarigga Ra’isul Wasaaraha dalkaasi Raja Pervez Ashraf, oo loo heysto dacwad la xiriirta musuq maasuq, iyadoo dibad baxayaal dowladda ka soo horjeeda ay isu soo baxeen wadooyinka caasimadda dalkaasi ee Islam-abad iyagoo dalbana in dowladda la kala diro.
Warar laga sii daayay Telefishinka dowladda Pakistan oo soo xiganayo saraakiil talaadadii shalay ayaa lagu sheegay in maxkamadu ay amartay xarigga Ra’isul Wasaaraha, iyo 15 qof oo kale, oo ku lug leh dacwad ku saabsan, xarumo Quwadda Korontada bixiya oo gaar loo leeyahay.
Eedaha ayaa ka yimid Jagadii uu horey Mr. Ashraf u hayay oo aheyd Wasiirkii biyaha iyo korontada Pakistan.
Waxaa lagu eedeeyay inuu laaluush qaatay si loo dhiso xarumo koronto oo gaar loo leeyahay, oo lagu xoojio – koronto yarida ka jirta Pakistan.
Mr. Asharaf ayaa beeniyay eedahaasi loo soo jeediyay.
Dadka indha indheeya siyaasadda Pakistan ayaa sheegaya in warqaddan lagu soo xirayo Ra’isul Wasaaraha ay sii xumeyso xiisadda ka dhex oogneyd dowladda iyo Maxkamadaha dalkaasi.